ISAZISO SOMPHAKATHI – UKUPHAZAMISEKA KOKUPHAKELWA KWAMANZI – KWADUKUZA – SIVUBELAINTUTHUKO
USUKU: NgoMgqibelo, 12 kuNhlolanja 2022
ISIKHATHI: Kusukela ngehora lesiNe ekuseni kuya kwelesiNe ntambama
Umphakathi uyaziswa ukuthi kuzobe kunokuphazamiseka kokuphakelwa kwamanzi kulezindawo;
KwaDukuza Central Business District , Darnall, Zamani, Zinkwazi, San Souci, Sakhamkhanya, Ekamu, Mdlebeni, Sokesimbone, Glenhills, Town View, Hill Crescent, Industrial Area, Lindelani, New Guelderland, Warrenton, Stanger Manor, Oceanview, Indian Village, Sunny Park, Mbozamo, Shakaville, Blythedale Beach nase Gledhow North Village.
AbaseMgeni Water bacele ukuvala amanzi usuku lonke ngoMgqibelo, mhlaka 12 kuNhlolanja 2022 kusukela ngehora lesiNe ekuseni kuya kwelesiNe ntambama ngenhloso yokulungisa i-scour valve esivuzayo phakathi kwaserobhothini eDarnall naseHlomendlini eMandeni.
Sibonga kakhulu ukubekezela komphakathi Umgeni Water usazama ukulungisa lenkinga. Yize zonke izigcinimanzi zinamanzi okwamanje, kungenzeka kube khona inkinga yokuphakela amanzi kwezinye Izindawo.
Umyalezo uvela kuMasipala wesiFunda iLembe